Deg-deg: Iiraan oo liistada ku dartey Taram ragga loo raadinayo dilka sarkaalkii sirdoonkooda - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Deg-deg: Iiraan oo liistada ku dartey Taram ragga loo raadinayo dilka sarkaalkii sirdoonkooda
Dawlada Iiraan ayaa soo saartey liisto dheer oo ay ku jiran dad loo raadinayo dilka sarkaalkii sirdoonka dalkaasi ee Sulaymaani. Dadka liistada ku jira waxa ka mida Taram oo xataa la raadsan doono haddii uu xilka ka dego.
Iiraan ayaa liistada u gudbisay hay’adda booliiska aduunka ee lagu magacaabo Interpol ooo inta badan raadsata ragga baxsadka ah ee ka yimi weadamada faqiirka ah.
Xagjir Taram ayaa u hanjabay maxkamada aduunka iyo hay’adda caafimaadka aduunka asagoo kibir awgeed sheeganaya in hay’ado uu bixiyo lacagta ugu badan ayna xukumi karin saraakiil dambiyo galay oo ka buuxa dalkiisa.
Liistada Iiraan ayaa noqonaysa tii ugu horeysay ee nooceeda ah oo ay qaado dawlad aan ka mid ahayn kuwa awooda isbida. Waxana la sugaa in hay’adaas qabato dadka ku qoran liistadaas oo uu ku jiro xagjir Taram.
Iiran ayaa lagu amaanay talaabadan ayadoo inta badan xasuuqyada uu gaysto Maaykanka ayna jirin cid kula xisaabtanta. Inkastoo an la filayn in wadamadu qabtaan haddana waxa ku filan inay ku jiraan liisto la raadinayo.